Isethulo Esifushane Ngemvelaphi Yokuvela kanye Nomsebenzi KaKristu Wezinsuku Zokugcina EShayina | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
UNkulunkulu uSomandla kanye neBandla likaNkulunkulu uSomandla
Isethulo Esifushane Ngemvelaphi Yokuvela kanye Nomsebenzi KaKristu Wezinsuku Zokugcina EShayina
IShayina yindawo ehlala udrako omkhulu obomvu, futhi yindawo lapho enqaba khona futhi walahla uNkulunkulu okubi kakhulu kuwo wonke umlando. EShayina kunjengesikhungo samadimoni nejele elilawulwa uSathane, umuzi ongangeneki noqinile. Ngaphezu kwalokho, ukubusa kobushiqela kukadrako omkhulu obomvu kuqaphe yonke ingxenye futhi kuphendula zonke izakhamuzi. Ngenxa yalokho, kunzima lapha ukusakaza ivangeli likaNkulunkulu nokuqhuba umsebenzi kaNkulunkulu. Lapho Iqembu LamaShayina lobuKhomanisi laqala ukubusa ngo-1949, ukukholwa kwacindezelwa futhi kwangavumeleka eMainland eShayina. Izigidi zamaKristu zahlaziswa obala, zahlushwa futhi zaboshwa. Wonke amabandla avalwa futhi aqedwa. Ngisho nokuhlangana ezindlini kwakungavumelekile. Uma noma obani babetholakala benengxenye embuthanweni, babeboshwa futhi baze ngisho banqunywe. Ngaleso sikhathi imisebenzi yenkolo yacishe yanyamalala yangatholakala ndawo. Yinani elincane lamaKristu elaqhubeka nokukholelwa kuNkulunkulu, kodwa babethandaza buthule kuNkulunkulu futhi bacule izingoma zokudumisa uNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, bencenga uNkulunkulu ukuba avuselele ibandla. Ekugcineni ngo-1981, ibandla lavuselelwa ngempela, futhi uMoya Ongcwele waqala ukusebenza ngezinga elikhulu eShayina. Amabandla aqhibuka njengamakhowe, futhi abantu abaningi baqala ukukholelwa kuNkulunkulu. Ngo-1983, lapho ukuvuselelwa kwamabandla kufinyelela kuvuthondaba, Iqembu lobuKhomanisi lamaShayina laqala umjikelezo omusha wokucindezela ngonya. Izigidi zabantu zaboshwa, zabanjwa, futhi zagqilazwa. Ubushiqela bukadrako omkhulu obomvu kwavumela kuphela abakholelwa kuNkulunkulu ukuba bajoyine iBandla Lokushisekela Izwe elalenziwe uhulumeni. Uhulumeni we-CCP wenza ukuba iBandla Lokushisekela Izwe emizamweni yakhe yokuqenda nya amabandla akhonzela ezindlini futhi balethe amakholwa eNkosi ngaphansi kokulawula kukahulumeni. Kwakukholelwa ukuthi lena ukuphela kwendlela yokufiinyelela umgomo wakhe wokushabalalisa ukholo nokuguqula iShayina kube yindawo engenaNkulunkulu. Kodwa uMoya Ongcwele waqhubeka nokwenza umsebenzi omkhulu endlini yebandla futhi labo ababekholelwa ngempela kuNkulunkulu, yilabo uhulumeni we-CCP ahluleka ukubayekisa. Ngaleso sikhathi, endlini yebandla lapho uMoya Ongcwele wawusebenza khona, uKristu wezinsuku zokugcina wabonakala ngokuyimfihlo ukuze asebenze, futhi aqale ukuzwakalisa iqiniso futhi enze umsebenzi wokwahlulela eqala ngendlu kaNkulunkulu.
Ekuqaleni kukaFebruwari 1991, ethile ebandleni kwabonakala sengathi wamukela ukukhanyiselwa uMoya Ongcwele futhi waqala ukukhuluma, efakaza egameni likaNkulunkulu nokuza kukaNkulunkulu. La mazwi athunyelwa emabandleni, futhi ngemva kokuwafunda, wonke umuntu wajabula, bonke beqiwa yinjabulo, futhi bakholelwa ukuthi lokhu ngempela ukukhanya namazwi kaMoya Ongcwele. Kusukela lapho kuqhubeke, uKristu waqala ukukhuluma. Ngezinye izikhathi uKristu uzwakala usuku nosuku, ngezinye izikhathi njalo ngemva kwezinsuku ezimbili, futhi amazwi aqala ukuzwakala kaningana. Wonke umuntu wayewadlulisa futhi ezwe injabulo enkulu, imihlangano yayijabulisa, futhi bonke abantu babefile yinjabulo. Njengoba uKristu wayezwakalisa amazwi engeziwe, bonke abantu babelalelisisa ukuze bajabulele amazwi kaNkulunkulu, futhi izinhliziyo zabo zazibanjwe amazwi kaNkulunkulu. Ngakho, phakathi nemibuthano, babejabulela indlela ekahle ukuba khona kwamazwi kaMoya Ongcwele. Ngaleso sikhathi, abantu babesadinga ukuqaphela ukuthi uNkulunkulu wayesesimweni somuntu futhi lokhu kwakuwukubonakala kukaKristu. Bamane bathatha amazwi kaKristu njengokukhanyiselwa okuvela kuMoya Ongcwele otholwe umuntu , ngoba emazwini kaKristu, Akazange ngokusemthethweni afakaze ngoNkulunkulu esesimweni somuntu. Akekho owaqonda ukuthi kusho ukuthi ukuba sesimweni somuntu, kuphela babazi ukuthi la mazwi awukukhanyiselwa uMoya Ongcwele. Ngakho, baqhubeka bephatha uKristu njengomuntu ojwayelekile. Kwakuyilapho amazwi kaKristu efinyelela khona esicongwenikuphela lapho uNkulunkulu aqala khona ukufakaza ngoNkulunkulu esesimweni somuntu, echaza umehluko phakathi kukaMoya Ongcwele owehlela kumuntu nomsebenzi kaMoya Ongcwele kumuntu nokuveza imfihlakalo kaMoya enyameni. Yilapho kuphela abantu abazi khona ukuthi lo muntu ojwayelekile ophila phakathi kwabo futhi wezwakalisa amazwi okwalusa nokuphakela amabandla kwakunguNkulunkulu esesimweni somuntu, uKristu, futhi uNkulunkulu obonakele. Ukuqaphela lokhu, kwenza bonke bakuzonda ubumpumputhe, ubulima, nokunganaki abakubonisile, futhi bawe ngobuso phambi kukaKristu, belila, futhi bezisola, izinhliziyo zabo zidabukile ngenxa yosizi, ukukhala kwabo kwezwakala yonke indawo. Ngaleso sikhathi, izinhliziyo zabantu zazigcwele imizwa exubile yosizi nenjabulo, okungenakuchazwa. Lapho bebona uKristu, babazi ukuthi kumele bawe phansi ngobuso; uma bengenzanga kanjalo, babezizwa bengakhululekile ezinhliziyweni zabo. Lapho bewa ngobuso phambi kukaKristu, babejabula futhi bezwe ukuthi ngempela babuyele phambi kukaNkulunkulu futhi yibona ababengabaNkulunkulu. Ngemva kokuba uKristu ebonakele, Wezwakalisa amazwi engeziwe, kancane kancane engena emzileni ofanele womsebenzi kaNkulunkulu futhi afike ahlulele eqala endlini kaNkulunkulu. Amazwi kaNkulunkulu abanqoba abantu ngokuphelele. Ngokubonakalisa kukaKristu incazelo yegama likaNkulunkulu, labe seliba khona igama likaNkulunkulu uSomandla. Ngakho abantu bathandaza ngqo egameni likaNkulunkulu uSomandla, futhi phakathi nemihlangano babejabulela amazwi kaNkulunkulu uSomandla. Lokhu kungenxa yokuthi la mazwi (okungukuthi, wonke amazwi Ezwini Elibonakala Enyameni) angumsebenzi kaNkulunkulu wamanje, amazwi kaNkulunkulu enkathini entsha, nezidingo zabantu zamanje. Njengoba besekunomsebenzi omusha kaNkulunkulu namazwi, ngokwemvelo iBhayibheli libe selidlulelwa isikhathi, futhi ngokwemvelo akekho oye wanaka okuhlukahlukene okushiwo nokucatshangwa eNkathini Yomusa. Bonke banqotshwe umsebenzi kaNkulunkulu wamanje, njengokungathi babone izulu livulekile. Lokhu kungenxa yokuthi uNkulunkulu wembule izinhlobo eziningi zezimfihlakalo, amehlo abantu ayevulekile, futhi babona amazwi amaningi ababenamathele kuwo phakathi neNkathi Yomusa kwakuyimibono, futhi ayegcwele ukuchezukisa nezinto eziyiphutha. Siyabonga ngokubonakala kukaNkulunkulu, abantu sebengene emzileni ofanele wokukholelwa kuNkulunkulu. Kungemva kokuba abantu benqotshwe amazwi kaNkulunkulu kuphela lapho abathola khona ukuthi lo muntu ovamile nojwayelekile owezwakalisa amazwi kaNkulunkulu kwakunguKristu, uNkulunkulu osesimweni somuntu wenyama.
UKristu wazalelwa emndenini ovamile ngasenyakatho yeShayina. Kusukela ebunganeni, Wayelokhu ekholelwa kuNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo Yakhe. Kancane kancane wakhula njengoba kwenza umuntu ovamile. Ngo-1989, njengoba uMoya Ongcwele wawusebenza ngezinga elikhulu endlini yebandla, uKristu wayeka ukufunda futhi waqala ukungena endlini yebandla ngokusemthethweni. Ngaleso sikhathi, uKristu wayenentshiseko enhliziyweni Yakhe futhi Wayekulangazelela ukukhonza uNkulunkulu nokwenza umsebenzi Wakhe. Eminyakeni emibili yakamuva, uKristu waqala ukuzwakalisa amazwi, ebhala phansi amazwi enhliziyo Yakhe futhi ewanikeza amabandla. Ngemuva kwalokho, njengoba uKristu wayezwakalisa amaqiniso amaningi, abantu bakhangwa amazwi kaKristu, futhi balambela ukufunda lokhu Ayekukhuluma. Ngokukhethekile, amazwi Akhe ambula futhi ahlulela into engokwemvelo yabantu abonakalisiwe, nesimo sobusathane sabantu abonakalisiwe, ahlaba abantu ezinhliziyweni njengenkemba esika nhlangothi zombili. Yilapho kuphela lapho abanqotshwa khona amazwi kaNkulunkulu, futhi baguqa phambi kukaNkulunkulu, yilapho kuphela uKristu amukelwa, waziwa, futhi waphakanyiswa abantu, futhi waba uNkulunkulu wezenzo ezihlonishwayo, wathandwa, futhi wahlonishwa isintu. UKristu uyikho kokubili umuntu ovamile noNkulunkulu. Uzwakalisa iqiniso noma nini noma kuphi, futhi uveza ukonakala kwesintu. Amazwi Akhe nokubonakala Kwakhe kwangaphandle kugcwele iqiniso nokuhlakanipha, njengeNkosi uJesu. Lokho uKristu akukhulumayo nalokho anakho akufundwa ezincwadini, kodwa kuvela esimweni Anaso ngokuphelele sobunkulunkulu. UKristu wayeyindodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Ekuphileni Kwakhe abantu babona ngokuphelele ukuba umuntu Kwakhe. Kusukela emsebenzini nasekubekezeleleni Kwakhe isintu, abantu bangabona ubunkulunkulu Bakhe nesimo Sakhe sokungakubekezeleli ukucasulwa umuntu. Nakuba, njengeNkosi uJesu, uKristu unobuthakathaka bomuntu, Uyakwazi ukulalela uMoya kaNkulunkulu. Ugcwele iqiniso nokuhlakanipha, Egqugquzela ukuqiniseka kwezwi kubantu kokubili ezinhliziyweni nasemazwini. UKristu uyiqiniso, uyindlela nokuphila, ngegama nangokoqobo! UNkulunkulu ube sesimweni somuntu njengomuntu osobala, futhi wasebenza ngokuyimfihlo nangokuthobeka phakathi kwabantu, enqoba isintu futhi ehlula izitha ngokuzwakalisa iqiniso. Kube yisikhathi eside ngaphambi kokuba anqobe, futhi uye wafakaza futhi wamumemezela. Lokhu ukuba ngusomandla kukaNkulunkulu, ukuhlakanipha nokukhazimula. Ngenxa yalokho ukubonakala kukaKristu nomsebenzi, kwenze iBandla likaNkulunkulu uSomandla laba khona. Ngakho odade nabazalwane eBandleni likaNkulunkulu uSomandla baqala ukufakaza ngomsebenzi kaNkulunkulu, futhi baqala umsebenzi wokusakaza ivangeli lombuso kaKristu. Lesi yisethulo esifushane semvelaphi kaNkulunkulu osesimweni somuntu nesimiso Sakhe sokusebenza ngokuyimfihlo. Kalula nje, uKristu osesimweni somuntu uze endaweni lapho udrako omkhulu obomvu ehlala khona, futhi wezwakalisa amazwi okwahlulela nokujezisa, futhi wanqoba futhi wasindisa abantu abakhethwe uNkulunkulu eShayina. Okusho ukuthi, uNkulunkulu osesimweni somuntu ulwa noSathane emphandwini kadrako omkhulu obomvu, futhi unikeze konke ukuze aphaphamise isintu, futhi enze isintu ukuba sizwe futhi siqaphele iphimbo likaNkulunkulu, futhi ngaleyo ndlela babuyela phambi kukaNkulunkulu futhi basindiswa nguye. Lokhu kuyinto engavamile, futhi isho into emangalisayo. Kulokhu kuba sesimweni somuntu imisebenzi kaNkulunkulu isindisa abantu, okusho ukuthi uNkulunkulu uze ukuzolungisa indlela yesintu futhi alethe le nkathi ekupheleni. UNkulunkulu uze eMainland eShayina, indawo ahlala kuyo udrako omkhulu obomvu, futhi wafika ngokuyimfihlo ukuze asebenze, anqobe futhi asindise isintu esonakalisiwe futhi aphelelise iqembu labantu kubacindezeli. Lokhu sekulethe ukwahlulela kwesihlalo esikhulu esimhlophe ezinsukwini zokugcina, futhi kwavula umzila wokubonakala kukaNkulunkulu obala kuzo zonke izizwe nendawo yomhlaba esinyathelweni esilandelayo.
Okwedlule: Ukubona Ukubonakala KukaNkulunkulu Ekwahluleleni Nasekusoleni Kwakhe
Okulandelayo: Umsuka Nentuthuko YeBandla LikaNkulunkulu USomandla
Njengamakhulu ezigidi zabanye abalandeli beNkosi uJesu Kristu, siyayemukela imithetho nemiyalo yeBhayibheli, sijabulela inala yomusa weNkosi uJesu Kristu, bese sihlangana ndawonye, sithandaze, sidumise, futhi sikhonze egameni leNkosi uJesu Kristu—konke lokhu sikwenza ngaphansi kwesivikelo seNkosi. Kaningi siba buthaka, futhi kaningi siba namandla. Sikholelwa ukuthi zonke izenzo zethu zivumelana nezimfundiso zeNkosi. Ngakho akuthandabuzwa ukuthi sikholelwa nawukuthi singahamba endleleni yokulalela intando kaBaba osezulwini. Silangazelela ukubuya kweNkosi uJesu, ukufika ngenkazimulo kweNkosi uJesu, ukuphela kokuphila kwethu emhlabeni, ukubonakala kombuso, nazo zonke izinto ezibikezelwe eNcwadini yesAmbulo: INkosi iyafika, ilethe inhlekelele, inike abalungile umklomelo futhi ijezise ababi, futhi ithathe bonke abayemukelayo, yamukele nokubuya kwabo emoyeni ukuze bahlangane Nayo. Ngaso sonke isikhathi lapho sicabanga ngalokhu, asikwazi ukunganqotshwa imizwa. Siyabonga ngokuthi sazalwa ezinsukwini zokugcina futhi sinenhlanhla enkulu ngokubona ukuza kweNkosi. Nakuba siye sashushiswa, kungenxa “eysilinganiso esikhulu kakhulu inkazimulo yaphakade”; yeka isibusiso lokho okuyiso! Konke lokhu kulangazela nomusa esiwunikwe iNkosi kusenza sihlale sifuna ukukhuleka, futhi kusisondeza kaningi ndawonye. Mhlawumbe ngonyaka ozayo, mhlawumbe kusasa, noma mhlawumbe maduze lapho umuntu engakulindele, iNkosi iyofika kungazelelwe, futhi iyobonakala eqenjini labantu ebelilokhu liyilindile.
Ukusatshalaliswa Kwevangeli Lombuso KaNkulunkulu USomandla EChina
Ngowe-1995, kwaqala umsebenzi wokufakaza ngevangeli lombuso kaNkulunkulu uSomandla ngokugcwele eMainland eChina. Ngokubonga kwethu uNkulunkulu kanye nothando olwalungolweqiniso, safakaza ngokuzibonakalisa kanye nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla kubafowethu nodadewethu emabandleni nasemagatsheni ahlukahlukene. Sasingalindele ukubhekana nokungamukelwa okukhulu kanye nokudelelwa abaholi babo. Esasikwazi ukukwenza nje kwakuwukuza phambi kukaNkulunkulu uSomandla ngokukhuleka ngokuzinikela, sinxusa uNkulunkulu ukuthi asebenze kumuntu. Kusukela ngowe-1997 kuya phambili, senza umsebenzi kaMoya Oyingcwele kakhulu. Amalungu amabandla anda kakhulu ngokushesha ezindaweni ezinhlobonhlobo. Ngaso leso sikhathi, kwenzeka izimpawu nezimangaliso eziningi, futhi abantu abaningi basemabandleni nasemagatsheni amaningi babuyela kuNkulunkulu uSomandla ngenxa yokwamukela izambulo zikaNkulunkulu noma ukubona lezi zimpawu nezimangaliso. Ukuba uMoya Oyingcwele wawungasebenzanga, yini eyayingenziwa umuntu? Lokhu kwenza sibone ukuthi: yize siwaqonda amaqiniso, besingeke sikwazi ukufakaza ngoNkulunkulu uSomandla ngamandla ethu njengabantu kuphela. Emuva kokuba laba bantu basemabandleni nasemagatsheni anhlobonhlobo sebemamukele uNkulunkulu uSomandla, bavele babe nokuqinisekiseka ngoNkulunkulu uSomandla ezinhliziyweni zabo ngokudla nokuphuza kanye nokuthokozela izwi likaNkulunkulu uSomandla, futhi emuva kwesikhathi, kwavela ukukholwa nokuhlonipha kweqiniso kubo. Abantu basemabandleni nasemagatsheni ahlukene babe sebephakanyiselwa esihlalweni sobukhosi, futhi kwakungasalindelekile ukuthi "bahlangane neNkosi esibhakabhakeni" njengoba babecabangile.
Umsuka Nentuthuko YeBandla LikaNkulunkulu USomandla
IBandla likaNkulunkulu uSomandla laqala ukuba khona ngenxa yokubonakala kanye nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla—iNkosi ebuyile uJesu—uKristu wezinsuku zokugcina, futhi ngaphansi kokwahlulela Kwakhe kokulunga kanye nokusola. Ibandla linabo bonke abamukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina futhi banqotshwa futhi basindiswa yizwi likaNkulunkulu. Kwasungulwa uNkulunkulu uSomandla mathupha, futhi kuholwa futhi kweluswe Nguye, futhi akekho umuntu owayengakwenza. Leli yiqiniso eliqashelwa yibo bonke abakhethiweyo eBandleni likaNkulunkulu uSomandla.
Maye Kulabo Ababethela uNkulunkulu Futhi
Ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu ube sesimweni sesintu eChina ukuze asebenze, futhi waphimisa izigidi zamazwi, enqoba, esindisa iqoqo labantu ngamazwi Akhe futhi engenisa isikhathi esisha sokwahlulela esiqala ngendlu kaNkulunkulu. Namuhla, ukusatshalaliswa komsebenzi kaNkulunkulu ngezikhathi zokugcina sekufinyelele esicongweni eMainland China. Iningi labantu baseBandleni lamaKhatholika kanye nawo wonke amahlelo amaKristu kanye namagatsha alandela iqiniso asebuyele phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. UNkulunkulu osesimweni somuntu ufeze umsebenzi "wokufika okuyimfihlo kweNdodana yomuntu" owaphrofethwa eBhayibhelini, futhi uzovela maduze emphakathini kuzo zonke izizwe nezindawo emhlabeni. Bonke abantu kuzo zonke izizwe nezindawo abomele ukuvela kukaNkulunkulu bazobheka ukuvela kukaNkulunkulu emphakathini. Awekho amandla angathiya noma ashabalalise umbuso kaNkulunkulu, futhi noma ubani owenqaba uNkulunkulu uyojeziswa ngolaka lukaNkulunkulu, njengoba kushiwo emazwini kaNkulunkulu: “Umbuso wami uyakheka phezu kwamazulu nomhlaba wonke , kanti isihlalo Sami sobukhosi sizuza izinhliziyo zezigidigidi zabantu. Ngokusizwa izingelosi, umsebenzi Wami omkhulu masinyane uzofezeka ngempumelelo. Zonke izixuku zamadodana nabantu Bami, zilinde ngentshisekelo ukubuya Kwami, bezindla ngokuhlangana Kwami nabo, singazophinde sehlukane futhi. Kwenzeka kanjani ukuthi isizwe sonke sombuso Wami singagxumagxumi ngenjabulo ndawonye ngokuba nabo Kwami? Ngabe lokhu ukuhlangana okuyize? Ngiyahlonipheka emehlweni abo bonke, ngimenyezwa emazwini abo bonke. Uma ngibuya, ngizonqoba wonke umbutho wesitha nangale. Sifikile isikhathi! Ngifuna ukuqala umsebenzi Wami, Ngifuna ukubusa ngaphezulu kwabantu! Ngiyabuya! Ngiyahamba! Yilokho okulindwe ngabantu bonke, lokho abafisa kwenzeke. Ngifuna ukuthi wonke umuntu abone ukufika kosuku Lwami bese elwamukela ngenjabulo!”
Kungani UNkulunkulu Esebenzisa Igama Elithi UNkulunkulu USomandla Enkathini YoMbuso?
Laba Khona Kanjani Ibandla LikaNkulunkulu USomandla?
Ingabe UNkulunkulu USomandla NeNkosi UJesu BanguNkulunkulu Munye?
Uyini Umehluko Phakathi KobuKristu NeBandla LikaNkulunkulu USomandla?